JJ Benítez: ndiye munyori kuseri kwaCaballo de Troya | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Mabhuku
JJ Benítez ndomumwe wevanonyanya kuzivikanwa uye vanoshandurwa zvakanyanya vatapi venhau veSpanish nevanyori venguva dzese. Kunyangwe akazivikanwa munenge pasi rese kubva pasaga yakakosha, Troy Bhiza, zvakare yakagadzira rakabudirira rezvenhau basa. Uchapupu hweizvi ndiko kucherechedzwa kwebasa rake rakakura neiyo 2021 Navarra Vanyori venhau.
Ukuwo, Benítez akatsaurira hupenyu hwake hwakawanda mukugadzirisa zvakavanzika (inonyanya kuenderana neufology). Muchokwadi, mukupera kwema70 akafunga kusiya hunyanzvi venhau kukuvadza kuda kwake maUFO. Parizvino, munyori weNavarrese atengesa anopfuura makopi emamiriyoni makumi matatu nemakumi maviri nemashanu pakati pezvinyorwa, zvinyorwa zvengano, zvinyorwa zvekutsvaga uye nhetembo.
1 Saga reTrojan Horse
1.1 Jerusarema (1984)
1.1.1 Mamwe mabhuku ari muTrojan Horse akateedzana
2 Ini, Jules Verne (1988)
3 Wangu Wandinoda UFOs (2001)
4 Iyo Njodzi Njodzi (2020)
5 Nhoroondo yaJJ Benítez
5.1 Mutori wenhau Times
5.3 Hunhu hwemabhuku aJJ Benítez
5.4 Rondedzero yemanoveli naJJ Benítez
7 JJ Benítez nhasi
The saga Troy Bhiza
Aya akateedzana anomutsa rwendo kuburikidza nenguva chinangwa chake ndechekuziva "hupenyu chaihwo" hwemurume anozivikanwa kwazvo munhoroondo yevanhu: Jesu weNazareta. Nenharo dzakadai, gakava racho raipfuura rekuvimbiswa. Nekudaro, Benítez akakunda vazhinji vashoropodzi, kunyanya mukati meChechi yeKaturike uye nemanzwi echiKristu anochengetedza.
Zvisinei, hazvirambiki izvo Troy Bhiza Iyo inokosheswa seklassiki yemabhuku muSpain. Zvirokwazvo, kubvira pakaburitswa vhoriyamu yekutanga muna 1984, zano rayo ravepo mune fungidziro yeSpanish yakabatana. Parizvino, saga iri rine mauto evateveri kutenderera pasirese; Uchapupu hweizvi ndiwo akawanda mapoka uye maforamu pasocial network.
Tanga rwendo kuenda kune yakapfuura; muverengi anoendeswa kuna AD 30, kunyanya pakati paKurume 30 naApril 9. Zviitiko zvinorondedzerwa muzvitsauko gumi nerimwe, chimwe chete pazuva. Bhuku rinomutsa mibvunzo inodarika zana uye kufungisisa (mimwe yacho ine minzwa) nezvehunhu uyo ​​chibayiro chake chakamutsa chiKristu.
Jerusarema. Bhiza ...
Mamwe mabhuku ari muTrojan Horse akateedzana
Chikamu cheKesariya (1996)
Ini, Jules Verne (1988)
Nezve ake manyorerwo, munyori Pamplona akaramba achizivisa kuyemura kwake basa raJules Verne. Uyezve, Benítez akaita ongororo yakadzama yemunyori wechiFrench uye munyori wemitambo, izvo panguva iyoyo zvakamupa mukana we "muoni".
Mumashoko aBenítez, Ini, Jules Verne ibhuku iro inotarisira kuratidza "kumeso kwakavanzika" kwe murume anofungidzirwa nevazhinji "Muporofita wesainzi." Icho, pasina kupokana, chinyorwa chakasarudzika kwazvo zvichienzaniswa nechero chipi zvacho chakanangana nehupenyu, kurudziro nebasa remunyori wechiFrance
MaFOs andinofarira (2001)
Vhoriyamu yechipiri yeunganidzwa Anenge akavanzika mabhuku, eIcho chinyorwa chakakosha kune vafologists, sekureva kwehunyanzvi mune ino chaiyo nzvimbo yekutsvaga. Zviri mukati zvinonakidza -inoita kunge yakanyorerwa vateereri vadiki- inovhara anopfuura makumi matatu emakore ekutsvaga kwakaitwa naBenítez.
Kune rimwe divi, bhuku iri rinopa muverengi mifananidzo inopfuura mazana mana nemakumi mana, iyo zana rayo inoenderana nemifananidzo yemunyori. Uye zvakare, mifananidzo isina kuburitswa inoratidzwa (senge pendi yevamwe vanoongorora muchadenga makore 450 apfuura, semuenzaniso). Zvakaenzana, Benítez anopomera NASA yekuve inhema uye anoita zvirahwe zvinonakidza; imwe yacho ndeyekuti "sei usina kudzokera kumwedzi?"
Wangu Wandinoda UFOs (Iwo ...
Njodzi yero (2020)
Njodzi yero ndicho chinyorwa chazvino chaBenítez, uyo akaigadzirira muchikepe chengarava pakaitika denda reCovid-19 muEurope. Nezve bhuku iri, munyori akati: "mufananidzo unonakidza wepfungwa wevanhu, vamwe vanhu vemamwe marudzi vanozvitenda kuti vari pamusoro pevamwe, vanokutarisa nekuzvidza chaiko, asi ivo vaitya sesu "...
Kune rumwe rutivi, izwi rekuti "yero" mumusoro rinoreva mavambo (kazhinji zvichienderana neWHO) Utachiona hweChinese izvo zvakachinja zvakanyanya pfungwa ye "zvakajairika" muzana ramakumi maviri nemasere. Naizvozvo, bhuku iri ratidziro huru pamusoro pekuti kutya rufu hakusarure chinzvimbo munharaunda kana kwazvinobva.
Njodzi huru ...
Nhoroondo yaJJ Benítez
Musi waSeptember 7, 1946, Juan José Benítez akaberekerwa muPamplona, ​​Spain. Kubva paudiki hwake aishanda mumabasa ane chekuita nekupenda uye zveceramics. Sekutaura kwaakaita iye, aigara ari mukomana anoda kuziva uye aifarira kuziva kuti chii chaiitika chakamupoteredza. Kwete pasina, Akafunga kudzidza Ruzivo Sayenzi paYunivhesiti yeNavarra (akapedza kudzidza muna 1965).
Chero zvazvingava, akangwara wechiSpanish haana kumboramba chero nyaya, kunyangwe yaipokana sei neruzhinji. Benítez haana zvakare hanya zvakanyanya pamusoro pemanzwi anobvunza kusafunga kwake kwakasimba kwesainzi uye vachimupomera kuti akanyanyisa kufungidzira. Chero zvazvingaitika, mamirioni evaverengi kutenderera pasirese atoziva nzira dzake dzekutsvaga.
Mutori wenhau Times
Mushure mekupedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeNavarra, Benítez akatanga kushanda muna 1966 kune pepanhau Chokwadi, muMurcia. Yakabva yapfuura Herald kubva kuAragon uye Iyo North Gazette kubva kuBilbao. Mune nhepfenyuro yakataurwa akashanda semumiriri chaiye munzvimbo dzakasiyana siyana muEurope uye akatenderera pasirese.
Munguva yema1970, mutapi wenhau weNavarrese akatarisa basa rake rezvenhau akananga kufology (Izvo parizvino inofungidzirwa seremasimba epasirese panyaya iyi). Mukufananidza, akapedza kuferefeta paTurin Shroud uye akaunganidza magwaro kubva kuSpanish Air Force pazvinogona kuitika UFO kuona.
Mu1979 Benítez akanyatso kusiya hunhau hwepamutemo kuti azvitsaurire zvizere mukuferefeta kwake kufarira. Kuve maitiro eanodzidzisa chinangwa, akangwara kubva kuPamplona akatanga kuburitsa mhedzisiro yemibvunzo yake. Saka, Hakusi kuwedzeredza kutaura kuti tsvagiridzo yakamuita iye munyori akasimba, nemabhuku anodarika makumi matanhatu akadhindwa kusvika parizvino.
Benítez akataura kanoverengeka kuti kunyora kunoda kuziva kutaura nyaya. Panguva ino, zviri pachena kuti akadzidza kuratidza kuda kwake kwezviitiko zvakajairika kana kuoma kunzwisisa. Nekudaro, bhuku rake rekutanga rakabuda: UFOs: SOS kuHumanity (1975), inoteverwa nemabhuku ane nhamba dzakanaka dzekutengesa senge rondedzero Vafambi vaJehovha (1980) uye Vaenzi (1982).
Hunhu hwemabhuku aJJ Benítez
Muna JJ Benítez, mabasa emuongorori nemunyori akabatanidzwa mune rimwe. Iko kusanganisa kwakaguma basa rinosanganisira nhetembo, zvinyorwa, huzivi nemanoveli. Asi, hazvisi zvekungochinjika chete asi nezvevhoriyamu inotsanangudza, kudzama kwehunyanzvi uye kubata kwechimiro zvinoenderana nezvinodiwa nerunyorwa runyorwa.
Nekudaro, munyori wechiSpanish anoita kunge anokwanisa kuzvivhara zvese, nekuti kuchikwereti chake ane bhuku reutikitivha uye zvinyorwa, Humwe hunhu hwaivepo (1977). Uyezve, ine nhepfenyuro yeterevhizheni, Enchanted nyika, yakarongedzwa muzvikamu gumi nematatu zvikamu zvakaparidzwa pakati pa2003 na2004. Mune mamwe mazwi, Benítez haana paanogumira pakutaura nyaya uye nekutaura zvinonetsa.
Rondedzero yemanoveli naJJ Benítez
Kumukira kwaRusifa (1985)
Iye Red Pope (Kubwinya kweMuti wemuorivhi(1992)
Zuva remheni (2013)
Njodzi Yakakura Yerima (2020).
Tichifunga nezverudzi rwekutsvagisa basa kunoitwa naJJ Benítez, zvingangove zvisingadzivisike kuti paisazove nenzvimbo yekushoropodza uye gakava mushure meanenge hafu yezana ramakore rebasa. Pakati pekupomerwa kwakakosha ndekwe sarudzo yemunyori yekuisa intuition yake pamberi pehukuru hwesainzi, iyo yaanoona seisinganzvengeki.
Mupfungwa iyi, munyori weNavarrese akataura izvozvo inopa kukosha kune manzwiro uye hunhu sechikamu chakakosha chevanhu. Akapomerwawo mhosva yekunyepera iyo Urantia Bhuku. Muchokwadi, kupomedzerwa kwakange kusina hwaro hwepamutemo, saka, Benítez akaita chirevo chekuzvipomera (icho chaakakunda). Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwo mavara ari mubvunzo anga ari munzvimbo yeruzhinji kubvira 1983.
JJ Benítez nhasi
Juan José Benítez akazviburitsa pachena mumabvunzurudzo akasiyana achangopfuura kuti inoenderera mberi nekutsvaga uye kunyora mapurojekiti eakasiyana kwazvo maitiro. Zvakanyanya, zvekuti muchirongwa cheterevhizheni che Vanomwe (2020) akati "Ndine mapurojekiti zana nemakumi mana, ndinoziva handisi kuzoaita." Chinhu chimwe ndechechokwadi, iye acharamba achitumira kana ada, nekuti imwe yemitsara yake inonyanya kuoneka ndeiyi:
"Ini handinyore kufadza chero munhu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku aJJ Benítez